शैक्षिक वर्ष खेर जाने जोखिम । | संस्कार एफ.एम. ९५.६ मेघाहर्ज
Home राष्ट्रिय शैक्षिक वर्ष खेर जाने जोखिम ।
शैक्षिक वर्ष खेर जाने जोखिम ।
Posted By: sanskar fmon: २५ श्रावण २०७७, आईतवार ०४:३९ In: राष्ट्रिय
विद्यालय तहमा एक शैक्षिक वर्षमा १ सय ९० दिन पठनपाठन हुनुपर्छ तर चार महिना यत्तिकै बितिसकेको छ । यही अवस्था विश्वविद्यालयहरूमा पनि छ । के अबको आठ महिनामा शैक्षिक वर्ष पूरा गर्न सम्भव होला ? विज्ञहरू भन्छन्, ‘कोभिडलाई कसरी सामना गरेर जाने भन्ने खाका ल्याउन नसके शैक्षिक सत्र खारेज हुन सक्छ ।’
काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमणले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म प्रभावित भएको छ । पाँच महिनादेखि पठनपाठन र परीक्षा अवरुद्ध बन्दा शैक्षिक वर्ष नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । वैशाखबाट सुरु हुने कक्षा १–१० को नयाँ शैक्षिकसत्र अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले सुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइ क्रियाकलाप अभियान पनि प्रभावकारी नहुँदा शैक्षिक क्षति बढ्दै गएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
हरेक वर्ष कक्षा १ मा मात्रै १० लाख बालबालिका भर्ना हुने आँकलन छ । यसपालि चैत पहिलो साताबाटै शिक्षण संस्था बन्द रहेकाले बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । ती बालबालिकाले वैकिल्पक शिक्षा पाए/नपाएको यकिन छैन ।विद्यालय तहमा ७० लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो र प्रिन्ट सामग्रीबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रक्षेपणअनुसार २३ लाख बालबालिकामा इन्टरेनट, रेडियो र टेलिभिजनलगायत कुनै पनि प्रविधिको पहुँचमा छैनन् । इन्टरनेटमा पहुँच भएका विद्यार्थी ७ लाख मात्रै छन् । ४० लाख बालबालिका रेडियो र टेलिभिजनको पहुँचमा रहेको दाबी गरिएको छ । वैकल्पिक कक्षाको प्रभावकारिता स्थानीय तह, शिक्षक र अभिभावकको सक्रियतामा भर पर्ने केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कतिपय स्थानीय तहमा वैकल्पिक कक्षाको राम्रो अभ्यास भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पालिकामा सुरु हुनै सकेको छैन ।’ देशभर गरिएको सर्वेक्षणमा केही विद्यालयहरूले गृह शिक्षकको अभ्यास गरेर घर/घर नै शिक्षक पठाएको उनले सुनाए । कतिपयमा भने वैकिल्पक कक्षाको सुरसारै छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट खाका दिन नसक्दा झनै शैक्षिक क्षति बढ्दै गएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । केन्द्रका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेलले कोरोना संक्रमण घट्दा र बढ्दाको दुवै अवस्थामा गरिने पठनपाठन विधिको विकल्प दिनुपर्ने बताए । विद्यालय तहमा एक शैक्षिक वर्षमा १ सय ९० दिन पढाइ हुन्छ । चार महिनादेखि पठनपाठन हुन नसकेकाले पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुने गरी पठनपाठन गराउन मन्त्रालयले निर्देश गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘कोरोना बढ्दै गए शिक्षक–विद्यार्थी फेस टु फेस भएर कक्षा चलाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण बढ्दा र घट्दा दुवै अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भनेर मार्गनिर्देशन हुन जरुरी छ ।’ अहिलेसम्म शैक्षिक क्षति भए पनि शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट्याए । ‘यो युद्धजस्तो बेला हो, सबै कुद्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘दौडाइ पुगेको छैन, माथिदेखि तलसम्म कुद्न नसके शैक्षिक वर्ष खारेज हुन सक्छ ।’निजी विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थी अन्त नजाउन् भनेर पनि भर्चुअल कक्षालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तर कोरोना जोखिमका बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक अनेक बहाना बनाएर विद्यालय नगएको र वैकल्पिक कक्षामा पनि सक्रिय नभएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । शिक्षकहरूको अहिलेकै कार्यशैली कायम रहे शैक्षिक वर्षमै ठूलो क्षति हुने उनीहरूले औंल्याए ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा त्रिविले पनि विभिन्न वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने मोडालिटीहरू प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले साउन ७ गतेबाट लकडाउन अन्त्य गरेपछि परम्परागत विधिबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्न जोड दिइएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयले भदौ मसान्तबाट स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई सर्कुलर गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनलाइनसहित विभिन्न वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरेर पठनपाठन साथसाथै परीक्षा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई सुझाएको छ । आयोगले कोरोना महामारीले उच्च शिक्षामा पुर्‍याएको क्षति न्यूनीकरणका लागि छाता निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ । निर्देशिकामा प्रचलित विधिबाट पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त विधिबाट सम्भव नभए उच्च शैक्षिक संस्थामा नै परीक्षा केन्द्र (होम सेन्टर) तोकेर पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । समयसीमा तोकेर खुला पुस्तक, गृहकार्य, कक्षाकार्य, प्रस्तुतीकरण, अनलाइन विधिबाट परीक्षा लिन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विद्यार्थीले घरबाटै उत्तर लेख्ने विकल्पसमेत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । त्रिविले भने परम्परागत विधिबाटै परीक्षा गर्न जोड दिएको छ । त्रिविले रेक्टर शिवलाल भुसालको संयोजकत्वमा परीक्षा सुधार समिति गठन गरेको थियो । परीक्षा नियन्त्रक, डिनहरू संलग्न समितिले घरमै रहेका विद्यार्थीलाई निश्चित समयमा उत्तर बुझाउने गरी खुला परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अनलाइनबाट परीक्षा लिने, प्रचलित मोडलअनुसार नै परीक्षा लिने र आन्तरिक मूल्यांकनलाई मान्यता दिन सकिने सुझाव दिएका थिए ।
बलिउडका महँगा अभिनेत्री ।
संस्कार खबर राष्ट्रिय दैनिक २०७७ साउन २५ गते ।